အဖြူရောင် သံစဉ်များ အပိုင်း (၃) - လင်းကြယ်စင်
ကျွန်မသူငယ်ချင်းလေး “K” အကြောင်းပေါ့ …“K” က ကျွန်မပေးထားတဲ့ Nick Name မဟုတ်ဘူး … သူ့ဘာသာပေးထားတာ … ပေးရတဲ့ အကြောင်းကလဲ သူ့မှာ ဘလော့ဂ်မရှိတာမဟုတ် … ရှိပါတယ် … ဒါပေမဲ့ စာရေးဖို့မဟုတ် စာဖတ်ဖို့အတွက် များလှစွာသော လင့်များကို ချိတ်ပြီး တစ်နေ့ တစ်နေ့ အသစ် တက်လာသမျှ ဘလော့ဂ်တိုင်းနီးနီးကို အပြေးအလွှားသွားဖတ်နိုင်တဲ့ အထိ စာဖတ်အားကောင်းသူပါ … တစ်ခါတစ်လေလဲ ဖတ်ပြီး ပေါက်ကရတွေလဲ မန့်တတ်သေးသမို့ ဘလော့ဂ် မရေးပေမဲ့ သူ့ကို သိနေကြ ပါတယ် … ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ “K” က ning site တစ်ခု မှာတော့ ပို့စ်အနဲအပါးရေးပြီး လူသိများလို့မို့ နေရာတကာ ပါလေသူကြီး ဖြစ်မှာ ကြောက်တာမို့ “K” နံမည်ပေးပြီး လာနေတာပါ …
ကျွန်မ ဘလော့ဂ် ရေးဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းအရင်းကလဲ သူ့ကြောင့်ပါ … ကျွန်မ စာတွေ မရေးရေးအောင် သူရေးတဲ့ ပို့စ်တွေထဲမှာ ကျွန်မကို သတင်းမှားတွေနဲ့လဲ ဖွတတ်သေးတယ် … ကျွန်မကျောင်းတုံးကတည်းက စာတို ပေစ ပေါက်ကရတွေ ရေးလေ့ရှိတော့ တစ်ခုခုဆို အဲဒီဆိုဒ် ပေါ်မှာ ကျွန်မရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေ တင်လိုက်ရမလား ဆိုတာနဲ့ချည့် ခြိမ်းခြောက်လေ့ ရှိတယ်… အဲလိုပြောလာတိုင်း ကျွန်မရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပေါက်ကရ အပိုင်းအစတွေကို မမှတ်မိလေတော့ ကြက်သီးထမိတာ အခါခါ … သူ့ပို့စ်တစ်ခုမှာ ကျွန်မကို ကောင်းကောင်း နှိပ်ကွပ်ထားတာလဲ ရှိသေး … အဲလိုတွေ ဆိုတော့ ကြောက်ရတယ် ပြောပါတော့ … (လက်သံ ကိုယ့်ထက်ပြင်းလေတော့ …) အမှန်တော့ ကျွန်မကို စာပြန်မရေး ရေးအောင် လုပ်နေခဲ့တာပါ … ကျွန်မသူ့ကို အဲလိုတွေ ရေးရပါ့မလား သွားအော်လေတော့ သူက ကျွန်မ စာပြန်ရေးအောင်လို့ stimulate လုပ်နေခဲ့တာပါတဲ့ …
အဲလိုနဲ့ ကျွန်မလဲ အဲဒီ ning site မှာ စာအနဲအကျဉ်း ရေးဖြစ်သွားတယ် … ရေးမိ လာတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဘလော့ဂ်လေး ရေးချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ မှတ်မှတ်ရရ သူ့မွေးနေ့အမီ ပြင်ဆင်ရင်း Birthday Wish ပို့ရင်းကနေ ကျွန်မလင့်ကလေးကို ပို့လိုက်တော့ အားရ၀မ်းသာနဲ့ အားပေးရှာတယ် … ကျွန်မက စာရေးချင်လို့ ရေးတာကလွဲရင် ဘာမှ မသိခဲ့ဘူး … ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ သူက ကျွန်မ လင့်ကို ချိတ်ပြီိး လည်ပေးနေခဲ့သေးတာ … ကျွန်မ စီဘောက်စ်မှာ ဟိုလူ ဒီလူ ပြန်လာအော်တော့ ကိုယ်က ဘာမသိ ညာမသိ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ … အဲဒီကျမှ စကားတွေ အချိတ်အဆက်မမိတော့ပဲ သူပြောတာ ကိုယ်မသိ ကိုယ်ပြောတာသူမသိတွေ ဖြစ်ကုန်တဲ့ အထိ … (သူ့စေ တွေက ကိုယ့် ဝေတွေ ဖြစ်ကုန်ရော …) အဲဒါကြောင့် ကျွန်မသူငယ်ချင်းလေး “K” က ဒီဘလော့ဂ် ရဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော်ဆိုလဲ မမှားဘူး … ဘာပဲပြောပြော ကျွန်မကို ထွက်ပေါက် ကလေးရှာပေးတဲ့ အတွက်ရော နားခိုစရာ အိမ်လေးတစ်လုံး ရှာပေးတဲ့ အတွက်ရော “K” ကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်…
ဒီသူငယ်ချင်းလေးက ငယ်ငယ်ကတည်းက သူငယ်ချင်း မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ သူနဲ့လဲ စိတ်တူ ကိုယ်တူလေးတွေ အများကြီး ရှိခဲ့တယ် … ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ယောင်လည်လည်နဲ့ ရောက်လာရတဲ့ ကျောင်းမှာ သူက ဆရာကြီးလုပ်ပြီး သြ၀ါဒခြွေခဲ့တာတွေကိုလဲ အမှတ်ရနေမိတယ် … ကျွန်မပြောခဲ့သလို ယောက်ကျားလေးကျောင်းမှာ ကျောင်းသားနဲ့ ကျောင်းသူကို သူအချိုးချထားတာ ရှိတယ် …7:1 ဆိုပဲ … အဲဒီတော့ Lab အခန်းထဲ ၀င်တဲ့အခါဆို လူခွဲလိုက်ရင် ယောက်ကျားလေး 7ယောက်ကြားမှာ မိန်းကလေး ကိုယ် တစ်ယောက်ပဲ ပါနေခဲ့လေတော့ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်နဲ့ ပေါ့ … အဲဒီ အချိန်တွေတုံးက Lab အခန်းထဲ မှာ ကွန်ပျူတာဆိုတာ မြင်သာမြင် မကြင်ရတဲ့ဘ၀ … ကိုရွှေသကောင့်သားတွေ ကြားလဲ ကိုယ်က မတိုးနိုင်ဘူးကိုး … အဲဒီတော့ “K” က ပြောတယ်… ကျောင်းတက် တဲ့ အချိန်မှာ အကုန်လုံးကို ရိုသေသမှုနဲ့ ကိုတွေ မတွေ တပ်ခေါ်မနေ နဲ့ … ခပ် တည်တည်နဲ့ နင် ၊ငါ နဲ့ သာချ … ဒါမှ ပို ရင်းနှီးပြီး ကိုယ်လဲ သိပ်ပြီး အနေမခက်စေဘူးပေါ့တဲ့ … သူပြောခဲ့တာမှန်တယ် … ကျွန်မတို့ကျောင်းမှာ ဒါလောက် ယောက်ကျားလေး များတာ အားလုံးကလဲ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးသူက ခပ်များများ … ကျွန်မတို့နှစ်က မိန်းကလေးတွေက ဆယ်တန်းအောင် ပြီးကာစ တကယ့်ကို ဘာမသိညာမသိ လူကောင်သေးသေးတွေ ချည့်မို့ … နောက်ပိုင်း တရင်းတနှီး ရှိလာကြတဲ့ အခါ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေကို ကျောင်းက ယောက်ကျားလေး အများစုကလဲ စ စရာ သတ္တ၀ါလေးတွေလိုပဲ သဘောထားခဲ့တာ … ကိုယ့်ထက်ပုပု သေးသေးဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ခု ဒေါက်တာ မမကြီး ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အဲဒီအချိန်ကဆို မူကြို လာတက်တာလား စခံရတဲ့ အထိ … ကျောင်းတုံးက ဓါတ်ပုံတွေ ပြန်ကြည့်မိတော့လဲ အဟုတ်ကို အထင်ကြီးချင်စရာ ကောင်းမနေခဲ့တာ အမှန် … အဲဒီတုံးက စတိုင်လား … ကိုကိုကြီးတွေကို ကြောက်နေခဲ့တာလား မသိ … ကျွန်မတို့ မိန်းကလေး အားလုံး ရှပ်အင်္ကျီ တဖားဖားနဲ့ လွယ်အိတ်စလွယ်သိုင်း တွေနဲ့ မိတ်ကပ်ဆ်ိုတာ ဝေလာဝေး သနပ်ခါးပါတဲ့ မျက်နှာက ခပ်ရှားရှား … ( အဲဒီတော့ … ကျွန်မရဲ့ “K” ပြောပြောနေခဲ့တဲ့ ရွာနားက ချောကလက် ရွာသား မစားချင်တာလဲ အပြစ်မဟုတ်ပါ …)
“K” နဲ့ ကျွန်မ Roll No. ကပ်လျက် မွေးနေ့လဲ နှစ်ရက်ပဲ ကွာတာမို့ ကျောင်းမှာ မွေးနေ့ပေါင်းလုပ်ဖူးတာလဲ သတိရနေမိတယ် … သီချင်း ကြိုက်တာ ကဗျာတွေ စာတွေ ကြိုက် တာလဲ တူနေခဲ့တာမို့ အဆက်အသွယ်ပြန်ရ ကြတော့လဲ ဘယ်တုံးကဘယ်လိုဆိုပြီး ပြောကြရတာ အမော … “K” တို့နဲ့လဲ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလိုက်တာ ဆယ်စုနှစ်ကျော် … အဆက်အသွယ်မပြတ် ပြန်တွေ့ ကြတာ ပြီးခဲ့တဲ့ လေးလပိုင်းကမို့ တစ်နှစ်တောင် မပြည့်ချင်သေး …
ကျောင်းတုံးက ကျွန်မပေါက်ကရရေး ထားမိတဲ့ စာတိုလေးနဲ့ အတူ သူကပြန်ရေး ထားတဲ့ စာတိုလေး တစ်စောင်ကို စာအုပ်တစ်အုပ်ကြားက ပြန်တွေ့တယ် …95 ခုနှစ်ကစာလေးမို့ 14 နှစ်လောက်ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ စာကလေးကို တွေ့တော့ အံ့သြော ၀မ်းသာမိတယ် … ကလေးလက်ရေးလေး တွေနဲ့မို့ ခုတွေ့တော့ scan ဖတ်ပြီး အမှတ်တရ တင်ထားချင်တာ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် scanner ကလဲ ပျက်နေတာမို့ အဆင်ပြေမှ ပြန်တင်မယ် …(အဟဲ ဖြတ် ၊ ညှပ်၊ ကပ် လုပ်ပြီးမှပါ… မကြောက်ပါနဲ့ သယ်ရင်းရယ် …) ကျွန်မ ပိုက်ပိုက်ကုန်သွားတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဘယ်သယ်ရင်းနဲ့ ဘာဖြစ်တာကို စိတ်ညစ်ပြီး ရေးထားမိမှန်းမသိတဲ့ စာတိုလေး … သူက တွေ့ပြီး ပြန်ရေးထားတာ သူ့ကြောင့်လား ဆိုပြီး သူ့ကြောင့် မဟုတ်ရင်လဲ ဘယ်သယ်ရင်း ကြောင့်လဲ ပေါ့ ... မျှဝေခံစားပေးမှာပေါ့တဲ့ … ပိုက်ပိုက်ပြတ်တာကတော့ စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ … မြန်မာ စကားပုံ တစ်ခု ကြားဖူးတယ်မို့လားတဲ့ “လူတော် နဲ့ ငွေ .. အတူ မနေ ” ဆိုပဲ … အဲလို ကျွန်မကို ရှာကြံပြီး နှစ်သိမ့်အားပေးတတ်တဲ့ သယ်ရင်းလေးပါ …
ခုပြန်တွေ့ကြတော့လဲ ကျွန်မရဲ့ စာရေးခြင်း အပေါ်မှာရော ကျွန်မ စိတ်ညစ်တတ် ခြင်းတွေ အပေါ်မှာရော တစ်ချိန်ကုန် အားပေးခဲ့တဲ့ သယ်ရင်းလေးမို့ ကျေးဇူးလဲ တင်မိသလို အမြဲလဲ လွမ်းနေမိပါကြောင်း …. (ကောင်းတာလေးတွေပဲ ရွေးရေးချင်စိတ်ပေါ်ပါစေ .. ဆိုလို့ ဒီတစ်ခါတော့ သနားသဖြင့် ဘာမှ မဖွသေးပါ … နောက်မှ အလျင်းသင့်သလို ပေါ့ …..)
စာရေးသူ လင်းကြယ်စင် at Wednesday, December 09, 2009
အစ်မရေ ဖွသာဖွဗျာ ဖတ်ချင်လို့း)
အစ်မလင်း သူငယ်ချင်းတွေက တော်တော်ခင်ကြတယ်နော်...
သူငယ်ချင်း K ဆိုသူရော
အကုန်နီးပါတူတယ်ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်ပြောရရင်တော့ ဂျပ်အုံးလီးဝမ်းစတပ် ပဲလိုတော့တယ်.. ဟိ အချွန်နဲ့ မသွားတယ်။
အဲဒီလိုမှ မဖြစ်ချင်ရင်လဲ ပြော ဒီမှာလဲ အားနေတယ်.. ဟီးဟီး...။
ုk ကလည်းခင်စရာကောင်းတယ်နော်...။ လင်းတစ်ကယ်ကံကောင်းတယ်...။ သူငယ်ချင်းကောင်းတော်တော်များများနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတာ...။ ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖြင့်...အဟင့်..(ပြန်တွေးရင်းနိုချင်တွားပျံဘီ...)
ဘာတဲ့ “ရွာနားက ချောကလက် ရွာနွားမစား”...တဲ့ ဟုတ်လား...။ မှတ်သားစရာပဲ...။ (ချောကလက်ဆိုတာ မည်းမည်း သည်းသည်းလေးတွေနော်...၊ လင်းတို့ရော...???..... အဟီး...)